Dikan-teny malalaka | Cool Ilienne's Weblog
Archive for the Dikan-teny malalaka Category
Posted in Dikan-teny malalaka with tags ananambo, Dago, hazo, Madagasikara, moringa, moringa stenopetala, sakafo on April 18, 2008 by coolienne
Indro misy dikan-teny nataoko momban’ny ananambo sy ireo zava-tsoa azo avy aminy. Avy amin’ny teny Frantsay no nanaovako io dikan-teny io. Lahatsoratra notsongaina tao amin’ny Midi Madagasikara, nivoaka omaly io (Aprily 17, 2008).
Tsara ny mampahafantatra fa dikan-teny malalaka izy io. Ny tenako moa tsy mpandika teny fa mba sendra nangatahin’olona dia nanao. Hitako fa tsy ampy koa ny unités de mesure, efa hatrany io! Farany: izay mahita dikan-teny hoan’ ireo teny mbola tavela amin’ny Farantsay ireo, mba omeo sopapa azafady ê!.
« Ananambo, loharanom-pahasalamana sy loharanom-piainana
Ny ananambo, ity hazo izay mbola tsy dia tena fanta-daza eto Madagasikara na ny raviny na ny voany, dia tena toy ny tobim-bolamena. Fikarohana maro mantsy no nampiseho fa mitondra zavatsoa maro ny ananambo, ary mety hatafavoaka ny tany iray amin’ny tsy fahampian-tsakafo mihintsy aza. Sokajiana ho hanin-kotrana ny ananambo na koa Moringa. Alain-drony amin’ny patsabe na hazandrano maina no fahandrahoantsika azy. Any Indy, ny voany no tena ambolen’ny olona azy, hohanina vita nahandro. Any amin’ny Sahel, ny ravin’ny Moringa oleifera dia atao legioma ary ny ravin’ny Moringa stenopetala kosa dia foto-tsakafon’ny foko Konso any Etiopia.
Karazany 13 no fantatra amin’ny ananambo hatramin’izao, anisan’izany ny Moringa stenopetala izay maniry any Afrika Atsinanana sy eto Madagasikara. Zavatra maro no azo ampiasàna ny hazon’ananambo, mahatanty main-tany izy, mora hampitomboina isa (hakan-taranaka) ary haingam-paniry ihany koa.
Zavatsoa avy amin’ny ananambo
– Fitiliana ara-tsakafo misimisy no nampiseho fa ny ravin’ny Moringa oleifera dia mitondra vitamines, mineraly ary proteinina be kokoa nohon’ny ankamaroan’ny legioma.
– Ny voan’ny Moringa dia mitondra polyélectrolyte cationique iray, izay efa nitera-bokatra nahomby amin’ny fandiovana ny rano, raha natao solon’ny Sulfate d’Alumine na floculants hafa izy tamin’izany.
– Ny menaka azo avy amin’ny voany dia menaka azo hohanina ary koa akora ho an’ny fanamboarana produits cosmétiques.
– Azo ampiasaina ho toy ny zezika maitso hampitomboina ny biby izy.
– Atao fampidiram-bola koa izy satria ny toton-dravin’ananambo (vovony) dia amidy ho fanampin-tsakafo, amin’ny vidiny 4 euros (14 000 Ariary eo ho eo) ny 100 g any Kenya, 2.4 euros any Ouganda ary 0.85 euros any Tanzania.
Azo ampiasàna ny ananambo:
– handiovana ny ao an-trano (totoina ny raviny),
– atao fefy,
– atao zezika: ny potika voan’ananambo avy nangalana menaka dia azo atao zezika hoan’ny voly be proteines,
– fandokoina lamba satria ny hazony dia manome loko manga
Vertus médicinales (inona no ilazàna an’io amin’ny teny gasy ?)
Ny fitsaboana ayurvédique any Indy dia manana fampiasana maro ny Moringa. Ohatra, ataony antibiotika natoraly, na koa fanampina amin’ny fiterahana, fanafody miady amin’ny aretin’ny aty…sns…
Ny tambanivohitra any Oman dia mampiasa ny menakin’ny Moringa hitsaboana aretim-bavony. Ary koa ataony ranomanitra, na koa mena-bolo.
Ny tambanivolo any Haity indray dia mampangotra ny voninkazon’ny Moringa ary ataony rano fisotro hitsaboany sery.
Any Malawi indray, ny ananambo maina dia hitsaboana aretin-kibo.
Otrikaina sy mineraly ao anatin’ny voan’ananambo fihinana milanja 100g
Carotène: 110 mcg
Minéraux : 2,0 g
Sucres : 3,7 g
Calories : 26
Fer: 0,18 mg
Potassium : 259
Cuivre : 0,01
Manganèse : 0,05
Zinc : 0,16
Chrome : 0,003
Chlore : 423
Thiamine : 0,05
Riboflavine : 0,07
Niacine : 0,2
C : 120 »
Vita ilay dikan-teny (Tsy tena vita kay! Mbola misy tsy haiko ny nandika azy dia navelako amin’ny teny vahiny fa mba ampio raha mahita dikany ianareo). Ireto kosa misy rohy mankany amin’ny sita hafa raha te hamaky bebe kokoa momban’ny ananambo ianao:
Ohatra, ny hetsika iray natao, teto Tana, vao haingana ampahalalàna ny ananambo. Toa nisinisy ny artista:
Ohatra, lahatsoratra Wikipedia (teny anglisy):
Ohatra, sita iray mikasika ny fanaparitahana ny moringa. Toa mahasoa izy ity! (Amin’ny teny anglisy):
Dia aparitaho any amin’ny rehetra any hoan’ny daholo be !